Izindaba - Ungawakhetha kanjani amandla alungile we-laser tube cutting machine?
Empilweni yansuku zonke, imvamisa sibheka amapayipi wensimbi ngokuhlangana njengamapayipi wensimbi, kepha emkhakheni wokusika ipayipi, kufanele sihlukanise ukuthi insimbi yipayipi lekhabhoni yensimbi, ipayipi lensimbi lensimbi, ipayipi lensimbi engagqwali, ipayipi le-titanium ingxubevange noma ipayipi le-aluminium ingxubevange . Ngoba izinto ezahlukahlukene zinezici ezahlukahlukene njengobulukhuni, ukuqina, ukuminyana, nokumelana nokushisa okuphezulu, ukuthi ukhetha kanjani okulungileumshini wokusika ipayipi we-laser amandla?
I-laser inemiphumela ehlukile ezintweni ezahlukahlukene zensimbi. Amandla e-laser ayahluka ngokuya ngezinto zensimbi. Isibonelo, ngobukhulu obufanayo, amandla e-laser okusika i-carbon steel aphansi kunalawo wensimbi engagqwali, futhi amandla e-laser okusika insimbi engagqwali angaphansi kunalawo aphuzi. Amandla ethusi mancane. Ngaphezu kohlobo lwensimbi uqobo, ubukhulu bayo buhlobene kakhulu namandla e-laser. Kuthubhu efanayo yensimbi, amandla okusika ka-10mm angaphansi kunokusika okungama-20mm.
Ngokuqondene nokuthi ungawakhetha kanjani amandla afanele, kufanele kunqunywe ngokuya ngohlobo, ubukhulu, ukwakheka nezinye izinto zento okufanele isikwe. Ngakho-ke, lapho uthenga umshini wokusika ipayipi we-laser, kufanele uvumele umenzi azi izici zento edinga ukusikwa. Into enhle kakhulu ukuhlinzeka ngepayipi kumkhiqizi ukuze ahlolwe.
Njengamanje, imishini ejwayelekile yokusika ipayipi le-laser emakethe inamandla amaningi, kusuka ku-1000W kuye ku-15000W. Ubukhulu bamapayipi wabakhiqizi abaningi abacubungula buphakathi kuka-8mm-12mm. Uma usika lokhu kushuba isikhathi eside, kunconywa ukuthi ukhethe imishini yokusika ipayipi engu-4000W-6000W. Uma ithusi inezimpawu zokucabanga okuphezulu, kunconywa ukusebenzisa umshini wokusika we-laser tube onama-8000W noma amandla aphezulu. Umshini wokusika ipayipi we-laser we-2000W-4000W unconyelwa ukushuba phakathi kuka-5mm-8mm. Ubukhulu obuphansi be-1000W imvamisa banele. Kumele kuqashelwe ukuthi uma uthenga umshini wokusika ipayipi we-laser we-6000W, lapho usika izinto ngogqinsi oluncane olucishe lube yi-4mm, unganciphisa ukukhulisa okukhiphayo futhi ukuvumelanise no-2000W wokusika, okusindisa amandla futhi konga ugesi nezindleko.
Isikhathi Iposi: May-04-2021